Renova (ရီနိုဗာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Renova (ရီနိုဗာ)
Renova (ရီနိုဗာ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Renova (ရီနိုဗာ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Renova (ရီနိုဗာ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Renova® ကို အရေပြားတွန့်ခြင်း၊ အကွက်လိုက် အရေ ပြား အရောင်ပြောင်းခြင်း နှင့် အရေပြားကြမ်းခြင်းတို့ကို ကုသ ရန် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အရေပြားတွန့်ခြင်းကို ဖယ်ရှား မပစ်နိုင်ပါ။ နေလောင်ထားသော အရေပြားကိုလည်း ပြန်လည် ကောင်းမွန်အောင် မလုပ်နိုင်ပါ။
Renova (ရီနိုဗာ) ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ
နေရာအလိုက် လိမ်းရာတွင် သင်သည် အောက်ပါတို့ ပြုလုပ်သင့်သည်။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း Renova® ကို တိကျစွာ သုံးပါ။
ပါးစပ်မှ မသောက်ရ။ Renova® ကို အရေပြားပေါ် တွင်သာ သုံးရမည်။
ဆပ်ပြာဖြင့် သင့်မျက်နှာကို ညင်သာစွာ ဆေးကြော ပါ။
အရေပြားကို ခြောက်အောင် လက်ဖြင့်ပုတ်ပြီး Renova® 0.02% မသုံးမီ ၂၀-၃၀ မိနစ် စောင့်ပါ။
Renova (ရီနိုဗာ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Renova® ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိုလှောင်ခြင်း သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆေးမပျက်စီးစေရန် ဆေးကို ခဲအောင် မလုပ်ပါနှင့်။ Renova® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Renova® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Renova (ရီနိုဗာ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Renova® မသုံးမီ သင့်တွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာ ဝန်အားပြောပါ။
Renova® တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ဓါတ် မတည့်ပါက
အခြား ဆေးများ၊ အစားအစာများ၊ ဆိုးဆေးများ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိပါက
အခြား ကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိပါက၊ Renova® နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော အခြားဆေးများ သောက်နေရပါက
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Renova (ရီနိုဗာ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Renova® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Renova® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Renova® သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် X ရှိသည်။
Renova (ရီနိုဗာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အခြားဆေးများ သောက်သကဲ့သို့ပင် Renova® သောက်ခြင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အချို့ကို ဖြစ်စေသည်။ အများစုမှာ အဖြစ်နည်းပြီး ဖြည့်စွက်ကုသမှု မလိုအပ်ပါ။ သို့ သော်လည်း ဤဆေးမသောက်မီ ပြဿနာတစ်ခုခု ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထား သည်။
ကုသထားသော အရေပြားတွင် ပြင်းထန်စွာ ပူလောင်ခြင်း၊ စူးရှနာကျင်ခြင်း၊ ကျိန်းစပ်ခြင်း
ပြင်းထန်စွာ နီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဖောင်းကြွခြင်း၊ အလွှာလိုက်ကွာခြင်း
ဆေးလိမ်းသောအခါ ပူနွေးခြင်း၊ စူးရှခြင်း
ကုသထားသော အရေပြားတွင် အရောင်ပြောင်းခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Renova (ရီနိုဗာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Renova® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
ဤဆေးနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ထုတ်ကုန်များမှာ
ဆေးပါသော သို့မဟုတ် ကြမ်းသော ဆပ်ပြာများ
ဓါတု ဆံပင်ချွတ်ဆေး သို့မဟုတ် ဖယောင်း
လျှပ်စစ်ဖြင့် အမွေးအမျှင် နုတ်ပယ် အလှပြင်ခြင်း
အရက်၊ ဟင်းခတ်အမွေးအကြိုင်၊ သံပုရာသီး ထုတ် ကုန်များ
ခြောက်သွေ့မှုကို ဖြစ်စေသော ဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ အလှကုန်များ
သင့်အရေပြားကို ယားယံစေသော အခြား ထုတ် ကုန်များ
Thiazides ( သွေးပေါင်တက်ခြင်းကို ကုသရန်)
Tetracyclines, fluoroquinolones, sulfonamides ( ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကို ကုသရန်)
Phenothiazines ( ဆိုးရွားသော စိတ်ရောဂါများကို ကုသရန်)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Renova (ရီနိုဗာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Renova® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Renova (ရီနိုဗာ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Renova® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Renova (ရီနိုဗာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Renova® ဆေး အချိုးအစားအတွက် အချက်အလက်များ ကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Renova (ရီနိုဗာ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာ များအတွက် ဆေးညွှန်းမှာ အတိအကျ မရှိ သေးပါ။ ကလေးများအတွက် စိတ်မချရပါ။ အသုံးမပြုခင် ဘေးကင်းမှုကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် အရေးကြီးသည်။ ပိုမို သော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Renova (ရီနိုဗာ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Renova® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
ခရင်မ် 0.02% , 0,05%
Renova® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Renova Renova® (tretinoin). http://www.medicinenet.com/tretinoin_cream/article.htm. Accessed ® (tretinoin). http://www.rxlist.com/Renova-002-side-effects-drug-center.htm. Accessed November 14, 2016.
Renova® (tretinoin). http://www.webmd.com/drugs/2/drug-12147/Renova-topical/details. Accessed November 14, 2016.
Renova® (tretinoin). https://www.drugs.com/pro/Renova-cream.html. Accessed November 14, 2016.